दोस्रो दिन पनि 'अनलाइन सेयर कारोबारमा समस्या' ! | Ekhabar Nepal
अर्थ कार्तिक २५ २०७५ ekhabarnepal
काठमाडौं । तिहारपछिको पहिलो कारोबार पनि सेयर लगानीकर्ताका लागि फलदायी बन्न सकेन । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)ले गएको मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको हातबाट सुरु गराएको अनलाइन प्रणालीमा दोस्रो दिन पनि समस्या आएको छ, साथै परिसूचक पनि घटेको छ ।
यसअघि मंगलबार पनि प्राविधिक कारणले लगानीकर्ताले कारोबारबारे अपडेट हुन पाएका थिएनन् । लामो समयको प्रतिक्षापछि आएको अनलाइन प्रणालीले सुरुका दिनमै समस्या देखाउँदा लगानीकर्ता आक्रोशित बनेका छन् ।यसअघि नेप्से इन्डेक्स गायब भएको थियो भने मार्केट डेप्थलगायत सूचकांक पनि देखिएका थिएनन् । नेप्सेले भने वेबसाइटमा रहेको पुरानो डाटा सार्नुपर्ने भएकोले समस्या उब्जिएको जनाएको छ । डाटा हबमा रहेको सर्भरमा आएको खराबीका कारण आइतबारको सुरुवाती बजार प्रभावित भएको नेप्सेको दावी छ । नेप्सेले आइतबारको सुरुवाति कारोबारमा मार्केट डेप्थले साइटलाई धेरै लोड दिएकाले निष्क्रिय पारिएको पनि बताएको छ ।नेप्से सर्भरमा समस्या देखिएको र लगानीकर्ताले सेयर बजारको कारोबारबारे यथार्थ जानकारी पाउन नसकेको दिन नेप्से परिसूचक भने ओरालो लागेको छ ।
साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक १७ दशमलव ३१ अंकले घट्दै १ हजार २ सय ५ दशमलव २२ अंकमा पुग्दा लगानीकर्तालाई खुसी दिन नसकेको हो । परिसूचकमा १ दशमलव ४२ प्रतिशतको गिरावट आयो भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स ४ दशमलव ११ अंकले घटेर २ सय ५५ दशमलव ९८ अंकमा पुग्यो ।
नेप्से घट्दा यसदिन कारोबार रकम भने न्यून रह्यो बजारलाई यसदिन साइटमा आएको समस्याले गराएको हो । आइतबार बजारमा ९ करोड ९४ लाख ३० हजार रुपैयाँका सेयर किनबेच भएका छन् । यसक्रममा १ सय २५ कम्पनीका ३ लाख १४ हजार २ सय ४७ सेयर कित्ता खरिदबिक्री भए । नेप्से घट्दा आइतबार सेयर बजारको कूल पुँजीकरण १४ खर्ब ६४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।आइतबार कारोबार आएको वित्त र अन्यसमूह बाहेक सबै समूह घटे । आज वित्त समूह १ दशमलव २५ र अन्य समूह शून्य दशमलव ७३ अंकले बढ्दा जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी २९ दशमलव ११ अंकले ओरालो लाग्यो । त्यसैगरी बैंकिङ समूहमा पनि २५ दशमलव शून्य ८ अंकको गिरावट देखियो ।
नेप्से घट्दा आइतबार बजारमा नेपाल स्वदेशी लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् । कम्पनीको सेयर मूल्य ३ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढ्दा अपि पावरको सेयर मूल्य ९ दशमलव ९४ प्रतिशतले घट्यो । यसदिन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयर मूल्य पनि करिब ९ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो ।नेप्सेमा आइतबार कारोबार भएका १ सय २५ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी कारोबार प्रभु बैंकको भएको छ । यसदिन बैंकका ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको हो ।